Yuusuf Garaad Oo Booqday Maxaabiista Soomaaliyeed Ee Ku xidhan Dalka Seychelles. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Seychelles(FMN)—Wasiirka Wasaarada Arimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane;Yuusuf Garaad axmed Cumar ayaa booqday qaar kamid ah maxaabiista Soomaalida ah ee ku jira xabsiyada Dalka Seychelles waxa uuna safarkiisa iyo waxii halkaasi kala kulmay iyo waliba xaaladda guud ee ay dhalinyaradaasi ku suganyihiin ka qoray wartbixintan hoos ku lifaaqan.
Xabsi ku yaalla Jaziiradda Mahe ee dalka Seychelles ayaan maanta ku soo booqday 15 Soomaali ah oo halkaa ku xiran.Waxay ku xukuman yihiin sannado kala duwan ka dib markii lagu helay dembi burcadbadeednimo.
Waxaa laga soo qabtay xeebaha dalka Soomaaliya.Mid ka mid ah oo ay u dhammaatay muddadii lagu xukumay ayaa bisha Disembar 2017 la sii deyn doonaa.Inta kale waxaa u dhimman sannado xabsi ah, waxayna mas’uuliyiinta Seychelles diyaar u yihiin in isla bisha Disember 2017 ay ku wareejiyaan Dowladda Soomaaliya.
Inkatsa oo xorriyad la’aan iyo xukun dheer ay ku jiraan, haddana dhallinyarda kama muuqan ilgooyo iyo niyad jab toona.Waxay ahaayeen dad ay oogadooda iyo hugooduba nadiif yihiin.
Inta ay xabsiga ku jireen waxay ku barteen af Ingiriis iyo xirfado dhowr ah.Intaa ka dib waxaan booqday 6 dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo ay ciidammada Midowga Yurub ee xeebta Soomaaliya ilaaliyaa ay ka soo qabteen aagga Degmada Marka ee Shabeellada Hoose, toddobaadkii hore, dalkanna ku xirnaa afar maalmood.
Waa dhallinyaro ku eedeysan burcadbadeednimo.Waxay ku doodayaan in ay ahaayeen kalluumeysato. Nimankaan wax hub ah laguma arag doontooda. Waxay leeyihiin matoorka ayaa ka xumaaday doonta markaas ayay jihada ay doonto ula sabbeysay.
Baaritaan ayaa ku socda. Maxkamad ayaana la soo taagi doonaa.Waxay ku soo xoomeen calanka Soomaaliya oo surnaa baabuurka la igu waday, iyaga oo ku dhawaaqaya – Soomaaliyeey toosa, toosa oo isku tiirsada…
Xigasho:- Yusuf Garaad
Previous Previous post: Wasiirka Wasaarada Gaashaandhigga Soomaaliya Oo Hadda La Magacaabay.
Next Next post: Akhriso;Liiska Golaha Wasiirada Cusub ee Maamul-goboleedka Hir-shabeelle.